Ny zavatra mbola tsy maintsy fantatsika momba ny Apple Watch | Vaovao IPhone
Amin'ity alatsinainy ity no andro hahalalantsika ny antsipiriany rehetra momba ny Apple Watch. Betsaka ny vinavinany momba ny vaovao hafa hiaraka amin'ilay Apple Watch nandrasana hatry ny ela, izay heverina fa efa nilaza tamintsika ny zavatra rehetra tokony ho fantatsika volana vitsivitsy lasa izay. Saingy tsy misy zavatra mety ho lavitra ny fahamarinana, satria mbola betsaka ny zavatra tsy fantatra tokony hohazavaina amin'ny fehezantenin'ny alatsinainy. Raha mieritreritra ianao fa efa mahalala ny zavatra rehetra tokony ho fantatrao momba ny Apple Watch dia jereo eto ambany dia ho hitanao ny tsy izy.
1 Vidiny sy misy
4 Tsy tantera-drano
Ny tsy fantatra izay mahaliana antsika indrindra. Fantatsika fa ny maodely ara-panatanjahantena dia manana vidiny $ 349, saingy ny tsy fantatsika dia ny vidin'ny maodely lehibe kokoa, na raha miankina amin'ny tady izay safidintsika. Tsy lazaina intsony ny vidin'ny maodely vy sy ny maodely vita volamena. Misy resaka $ 450- $ 500 ho an'ny Apple Watch vy, ary $ 10.000 ho an'ny Apple Watch Gold, fa tsaho fotsiny izany satria tsy misy fanamafisana ofisialy. Ho tonga amin'ny $ 1000 ve ny vidin'ny maodely vy misy tadiny vy? Toa be loatra ny fijerena ireo toetra ireo, na dia Apple aza.
Tsy fantatsika koa hoe aiza amin'ireo firenena no hanaovana ny fanombohana amin'ny dingana voalohany. Nanome toky i Tim Cook fa ho iraisam-pirenena ny fanombohana ny Apple Watch, ary fantatray fa ho tafiditra ao amin'ny onja voalohany i Alemana, ankoatran'i Etazonia mazava ho azy, fa Firenena iza avy no hanana tombontsoa hanana ny Apple Watch amin'ny andro voalohany? Mandra-pahoviana no hiandry ny ambiny?
Ny fehy dia ho iray amin'ireo lakilen'ny fahombiazan'ny Apple Watch. Raha ny marina, tany Cupertino dia nanao ezaka izy ireo mba hahafahan'ny fanovana fehikibo tsy mila fitaovana. Inona no vidin'ireo fehy ireo? Azony atao ve ny mividy azy rehetra ho toy ny kojakoja tsy miankina amin'ny fiambenana?
Tsy voahilika koa fa misy izany karazana kojakoja vaovao natokana ho an'ny Apple Watch. Efa niresaka momba ny mety ho headphones isika taloha, saingy mety misy vokatra maro hafa na avy amin'ny Apple na avy amin'ny antoko fahatelo natokana ho an'ny smartwatch izay hitantsika tao amin'ny Keynote.
Tim Cook dia nilaza fa ny bateria Apple Watch dia maharitra iray andro, ary tokony hamerenany azy isan-kariva. Tsy tenim-panjakana ofisialin'ny CEO an'ny Apple izy ireo, saingy raisina ho azy ireo. Na izany aza, mila miandry ny Apple manamafy ny iray amin'ireo lafiny mampiady hevitra indrindra amin'ny Apple Watch isika.
Raha tsy maintsy ampangaina isan'andro ny Apple Watch dia hampiditra dock charge hametrahana azy ve i Apple? Ho antsipiriany iray ny hikarakarana fatratra ny famantaranandronay sarobidy (sy lafo).
Heverina fa ny Apple Watch dia tsy tantera-drano, saingy tsy fantatsika amin'ny fomba ofisialy izany. Tsaho iray hafa izay navoaka tato ho ato izay noheverina fa nolazain'i Tim Cook dia ny fisotroan-dronono miaraka amin'ny Apple Watch tsy misy olana. Fantatsika fa misy singa sasany amin'ny famantaranandro voaisy tombo-kase hisorohana ny fahasimbana amin'ny hamandoana na ny vovoka, fa tsy fantatsika hoe manao ahoana ny fanoherana ny rano ananany. Mety mahatohitra tsotra izao ny hatsembohana, orana sy orana, na afaka milomano miaraka aminy akory isika.
Tsy isalasalana fa io no ho teboka matanjaka an'ny Apple Watch ary hampiala-tanana an'i Apple handresy ny ady amin'ireo mpifaninana aminy. Mety misy famantaranandro misy batterie bebe kokoa, miaraka amina famaritana ara-teknika tsara kokoa, na miaraka amina endrika izay tianao kokoa noho ny Apple Watch, fa handresy ny ady amin'ny fampiharana. Raha mila famantaranandro mahazo fampandrenesana aho dia hisy safidy maro, angamba mbola tsara kokoa aza, fa ny Apple Watch dia tokony hamela anao hanao zavatra izay mety nofinofisin'ny hafa fotsiny.
Raha ny tena izy, ity dia iray amin'ireo zavatra izay tokony hahagaga antsika indrindra momba ny fehezantenin'ny alatsinainy. Apple dia tokony manipy ny ambiny ary miomana fampiharana vitsivitsy vitsivitsy izay hamela anay tsy hiteny intsony ny fihetsiketsehana. Tsy isalasalana fa io dia tokony ho fanananao lehibe ary inona no tokony hahatonga ny be fisalasalana na tsy tapa-kevitra hisafidy ny findainao.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Apple products » Apple Watch » Ny zavatra mbola tsy maintsy fantatsika momba ny Apple Watch
Noraràn'ny WhatsApp mandritra ny androm-piainany ireo mpampiasa mpanjifa antoko fahatelo